Lisitry ny fanafody any an-dranomasina miaraka amin'ny zaza.
Fivoriam-piainana (Layfkakhi), fahasalamana, Baby Health, Travelling / From Poster
Matetika dia mitranga izany any ambadiky ny fiomanana rehetra alohan'ny dianay, adinonay ny zava-dehibe indrindra, momba ny fikarakarana ny fahasalamantsika amin'ny fialantsasatra, dia ny mikasika ireo fanafody ireo izay hanampy antsika hitazona izany mandritra ny dia an-dranomasina. Hamafiso tanteraka .. Adinoy fotsiny ny fanaovana lisitra medikaly eny an-dàlana, ary avy eo dia mametraka fanafody amin'ny valizy iray izahay.
Lisitry ny fanafody any an-dranomasina miaraka amin'ny zaza. Read full »
Inona ny antontan-taratasy ilaina amin'ny fialan-tsasatra miaraka amin'ny ankizy any ivelany
Fivoriam-piainana (Layfkakhi), Travelling / From Poster
Ny zaza dia mila pasipaoro sy taratasy fanamarinana. Indraindray mila ny faneken'ny ray aman-dreny sy ny visa ianao. Ny antoka dia mitaky amin'ny famoahana visa vitsivitsy. Ary na dia tsy mila izany aza izy ireo dia ilaina ny manao izany. Fandevenana vahiny Misy karazana pasipaoron'ny roa: taloha sy vaovao. Ny tranainy dia navoaka tamin'ny taona 2010. Nisy zaza tsy ampy taona tamin'ny 14. Ary ny iray sy ny ray aman-dreny dia nandeha tsirairay avy.
Inona ny antontan-taratasy ilaina amin'ny fialan-tsasatra miaraka amin'ny ankizy any ivelany Read full »
Fialantsasatra any Bolgaria
Travelling / From Poster
Tamin'ny vanim-potoana sovietika, ny toeram-pambolena vahiny mahazatra indrindra ho an'ny sendika dia ny morontsirak'i Boligaria. Io fahatsorana io dia niteraka amina fiovana manafintohina amin'ny lohahevitry ny filazalazana malaza momba ny tsy fisian'ny akoho. Ary zava-poana. Ny Ranomasina Mainty any amin'ny morontsirak'i Bolgara dia mafana sy madio, ny fasika dia volamena, ny fotaka dia mandoro. Mandritra ny dimy volana ny fotoanan'ny tora-pasika, ary saika tsy mety mihitsy ny hafanana ...
Fialantsasatra any Bolgaria Read full »
Aiza no mandeha amin'ny vakansy amin'ny fahavaratra 2016
Ny mpankafy ny dia hanana safidy sarotra - aiza no hialana amin'ny fialantsasatra fa tsy ny toerana mahazatra an'i Tiorkia sy Ejipta amin'ny taona 2016. Na dia izany aza, raha tianao, ny fidiran'ny Rosiana ho any amin'ireny firenena ireny dia tsy sarotra noho ny tamin'ny taona teo aloha, tsy nividy valim-pifidianana ireo sampan-draharahan'ny fitsangantsanganana an-trano. Ary midika izany fa izao no fotoana ahafahana mitady vahaolana mety. Raha, na dia teo aza ny tranga mampalahelo ho an'ny tsenan'ny mpizahatany, ...
Aiza no mandeha amin'ny vakansy amin'ny fahavaratra 2016 Read full »